လူမသိသေးတဲ့ နောက်ကွယ်ကအဓိပ္ပာယ်များနဲ့ အဆိုတော်ကြီး စိုင်းထီးဆိုင် သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတချို့ – Shwe Likes
ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖန်တ ရာတေအော င် နားထောင်ခဲ့ဖူး တဲ့ တစ်ချို့ သီချင်းလေးတွေ က ကိုယ်ထ င်သလို ချစ်တာ မေတ္တာ အေ ကြာင်းတွေ မဟု တ်ဘူး…တဲ့ တိုင် းရေးပြည်ရေး.. အကြပ် အ တည်းတွေ ကြားထဲမှာ.. လူထုရဲ့ ခံစားချ က်လေးတွေကို ကိုယ်စားပြု မွေး ဖွားလာတဲ့ သီချင်းေ လးတွေ ဖြစ်ပါသတဲ့
မနေ့ကမှ ဂရုတစ်ခု မှာအစ်ကိုတ စ်ယောက် ပြေ ာပြလို့ သိရတာ.. ဆရာစိုင်းခမ်းလိ တ်ရေးဖွဲ့ ခဲ့တဲ့ ဦးထီးရဲ့ မေမြို့မိုး သီချင်း ဟာ… တောင်ပေါ်မြို့လေး ပြင်ဦးလွ င်ကိုမဆီမဆို င် မန္တေ လးတိုင်းထဲ ထည့်ခဲ့လို့… ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းလေး ပါတဲ့
သံလွင်ချော င်းခြားဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက… မြစ်ဟို ဘက်ကမ်း.. ဒီဘက်ကမ်းမှာ တပ်စွဲထားတဲ့မြန် မာစစ်တပ်နဲ့ ဗမာပြည်ကွ န်မြူနစ်ပါတီ တို့ရဲ့ အာဃာ တကို ရေးဖွဲ့ခဲ့တာပါတဲ့ ရှိသေးတယ်..
ကိုယ်တစ်ေ ယာက်ထဲကြော င့်တော့ မဟုတ်ဘူး.. ဆိုတာ.. ခေါင်မလုံ ရင် စိုမှာပဲ… အစိုးရမကောင်းရင်.. ကိုယ် ဘယ်ေ လာက်လုပ်လုပ် အရာမထင်ဘူး လို့ ရွဲ့ဆိုခဲ့တာ ပါ ဟိုးဘက်ခေ တ်က မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားကို မီးပေးတာက လောပိတေ ရအားလျှပ်စစ် စက်ရုံကြီးပေါ့…
လောပိတ ရေတံခွ န်ကြီး ရှိနေ တဲ့ ကယားပြည် နယ် လေး ကတော့ မှောင်လို့ မဲ လို့ပေါ့လေ…. အဲ့ဒီ့မှာ… ရန်ကုန်မှာသာတဲ့လ… ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်လာ ရတာပါပဲ သိပ်ပြီး ပညာသားပါတဲ့ သီချ င်းလေး ရှိသေးတယ်…ကျနော်တို့ သိထားတဲ့… ဘီးနံပါတ်… OK 0122L ဆိုတဲ့ အပေါင်ဆုံး စက်ဘီးလေး အကြောင်းလေး မင်းသခင် မလေး ခမြာလေ..သိပ်ကိုစွဲလမ်းရှာနေ.. ပြန်ရွေးလို့ရ ခဲ့ရင် ပြန်ရွေးလို့ေပးလိုက်ချင်တယ်..တဲ့
ဘီးနံပါတ်..OK 0122L ဆိုတာ… ဖေဖော်ဝါရီ 12 ပြည်ထောင် စုနေ့က ချုပ် ဆိုခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်မှာ သဘောတူခဲ့တဲ့ ဖက်ဒရယ်မူ ကို ရည်ရွယ်ပါ သတဲ့.. လွတ်လပ်ရေး ရ ပြီးရင် ပေးမယ်ဆို တဲ့ သူတို့ ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်လေးကိုြ ပန်လိုချ င်ပါတယ်လို့ ဆိုလိုတာ… OK.. သဘော တူညီချက် စာချုပ် 0..(သုည) ဆုံးရှုံးတာ.. မရလိုက်တာ.. 12.. နေ့စွဲ 2…. လ L…Law. ဥပဒေကို ရည်ညွှန်း ပါသတဲ့ ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကို သိမှ ဒီသီချင်းလေး ပြ န်နားထော င်တဲ့အခါ
ရှမ်းတွေရဲ့ ခံစားချ က်ကို ပိုပြီး နားလ ည်လာရပါတယ်.. ဂီတ..အနုပ ညာဆိုတာ ဒါပါလား… ဒီသီချင်းတွေရေးခဲ့တဲ့ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ် ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမှု..ဖန်တီးနိုင်မှု ဟာလေး စားစရာ။ crd
ငယ္စဥ္ကတည္းက ဖန္တ ရာေတေအာ င္ နားေထာင္ခဲ့ဖူး တဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ သီခ်င္းေလးေတြ က ကိုယ္ထ င္သလို ခ်စ္တာ ေမတၱာ ေအ ၾကာင္းေတြ မဟု တ္ဘူး…တဲ့ တိုင္ းေရးျပည္ေရး.. အၾကပ္ အ တည္းေတြ ၾကားထဲမွာ.. လူထုရဲ့ ခံစားခ် က္ေလးေတြကို ကိုယ္စားျပဳ ေမြး ဖြားလာတဲ့ သီခ်င္းေ လးေတြ ျဖစ္ပါသတဲ့
မေန႔ကမွ ဂ႐ုတစ္ခု မွာအစ္ကိုတ စ္ေယာက္ ေၿပ ာျပလို႔ သိရတာ.. ဆရာစိုင္းခမ္းလိ တ္ေရးဖြဲ႕ ခဲ့တဲ့ ဦးထီးရဲ့ ေမၿမိဳ႕မိုး သီခ်င္း ဟာ… ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလး ျပင္ဦးလြ င္ကိုမဆီမဆို င္ မေႏၲ လးတိုင္းထဲ ထည့္ခဲ့လို႔… ဆိုခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလး ပါတဲ့
သံလြင္ေခ်ာ င္းျခားဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးက… ျမစ္ဟို ဘက္ကမ္း.. ဒီဘက္ကမ္းမွာ တပ္စြဲထားတဲ့ျမန္ မာစစ္တပ္နဲ႔ ဗမာျပည္ကြ န္ျမဴနစ္ပါတီ တို႔ရဲ့ အာဃာ တကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့တာပါတဲ့ ရွိေသးတယ္..
ကိုယ္တစ္ေ ယာက္ထဲေၾကာ င့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး.. ဆိုတာ.. ေခါင္မလုံ ရင္ စိုမွာပဲ… အစိုးရမေကာင္းရင္.. ကိုယ္ ဘယ္ေ လာက္လုပ္လုပ္ အရာမထင္ဘူး လို႔ ရြဲ႕ဆိုခဲ့တာ ပါ ဟိုးဘက္ေခ တ္က ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပားကို မီးေပးတာက ေလာပိေတ ရအားလၽွပ္စစ္ စက္႐ုံႀကီးေပါ့…
ေလာပိတ ေရတံခြ န္ႀကီး ရွိေန တဲ့ ကယားျပည္ နယ္ ေလး ကေတာ့ ေမွာင္လို႔ မဲ လို႔ေပါ့ေလ…. အဲ့ဒီ့မွာ… ရန္ကုန္မွာသာတဲ့လ… ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလး ျဖစ္လာ ရတာပါပဲ သိပ္ၿပီး ပညာသားပါတဲ့ သီခ် င္းေလး ရွိေသးတယ္…က်ေနာ္တို႔ သိထားတဲ့… ဘီးနံပါတ္… OK 0122L ဆိုတဲ့ အေပါင္ဆုံး စက္ဘီးေလး အေၾကာင္းေလး မင္းသခင္ မေလး ချမာေလ..သိပ္ကိုစြဲလမ္းရွာေန.. ျပန္ေရြးလို႔ရ ခဲ့ရင္ ျပန္ေရြးလို႔ေပးလိုက္ခ်င္တယ္..တဲ့
ဘီးနံပါတ္..OK 0122L ဆိုတာ… ေဖေဖာ္ဝါရီ 12 ျပည္ေထာင္ စုေန႔က ခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ကို ရည္ရြယ္ပါ သတဲ့.. လြတ္လပ္ေရး ရ ၿပီးရင္ ေပးမယ္ဆို တဲ့ သူတို႔ ရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ေလးကိုျ ပန္လိုခ် င္ပါတယ္လို႔ ဆိုလိုတာ… OK.. သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ 0..(သုည) ဆုံးရႈံးတာ.. မရလိုက္တာ.. 12.. ေန႔စြဲ 2…. လ L…Law. ဥပေဒကို ရည္ညႊန္း ပါသတဲ့ ဒီအဓိပၸာယ္ေလးကို သိမွ ဒီသီခ်င္းေလး ၿပ န္နားေထာ င္တဲ့အခါ
ရွမ္းေတြရဲ့ ခံစားခ် က္ကို ပိုၿပီး နားလ ည္လာရပါတယ္.. ဂီတ..အႏုပ ညာဆိုတာ ဒါပါလား… ဒီသီခ်င္းေတြေရးခဲ့တဲ့ ဆရာစိုင္းခမ္းလိတ္ ရဲ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ..ဖန္တီးနိုင္မႈ ဟာေလး စားစရာ။ crd
သနပ်ခါးလေးတွေ နဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ သမီးလေး ထရက်ရှာလေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေတင်ပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
မကြုံစဖူးထူးခြားမှုလေးကြောင့် ကံစမ်းရတာ ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဂဏန်းပေးလိုက်တဲ့ တေးသံရှင် တင်ဇာမော်